Mara | Martech Zone
Sunday, July 22, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ternyaahụ, enwere m ezigbo nzukọ na onye isi obodo nke otu ụlọ ọrụ. Ọ na-aghọzi onye ndụmọdụ na enyi. Ọ bụkwa ezigbo Onye Kraịst. Abụ m Onye Kraịst… mana tupu ịpupu ebe a, biko ka m kọwaa. Ekwere m na Jizọs ma jiri ya dịka onye ndụmọdụ maka otu m si emeso ndị ọzọ. Na 39, arụbeghị m nnukwu ọrụ na nke a mana m na-agbasi mbọ ike imeziwanye. Nke a bụ ebe m na-alụ ọgụ:
Ọ na-esiri m ike iru ndị mmadụ. Ka m na-eme agadi na ndụ, M chọrọ imeghe ogwe aka m iji gosi ndị mmadụ - mana ọ ga - akara m mma inyeghị ha oge nke ụbọchị. N’ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla?), Anaghị m egwu ndị ọzọ egwu. Anaghị m egwu egwu. Egwuregwu ahụ kpọrọ m asị - Achọrọ m ịrụ ọrụ ahụ. Akpọkwara m asị igwu egwu. Ọ dịghị ihe na-akpasu m iwe karị.
M na-agbasi mgba ike ole ole zuru. Ana m akwụ ụgwọ n'ihi na achọghị m ịnweta ụlọ. Ana m akwọ ụgbọ ala mara mma. Anaghị m azụ ọtụtụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu. N'iji ya tụnyere nke ụwa, m bara ọgaranya. N'iji ya tụnyere United States, anọ m n'etiti klas, ikekwe ọ dị obere. Ọ dị mma ịnwe ntụsara ahụ mgbe ndị ọzọ nọ n'ụwa enweghị? Ahụ́ ọ̀ ga-eru gị ala? Ọ bụ mmehie ịbụ ọgaranya? Amaghị m.
Ekwesịrị m ịlụ ọgụ ọbụlagodi na nke ahụ pụtara na ndị mmadụ ga-ebi na ọchịchị aka ike na-emegbu mmadụ? Ọ bụ naanị mba m na ndị agha m ka m ga-echebara echiche? Ndi Christian ‘ekere ọkpọkpọ mbubehe’ fo ke ini mbon en̄wen ẹbọde ufen? Ọ bụrụ na ị hụ onye na-achọ igbu mmadụ ọzọ na naanị nhọrọ gị igbochi ha bụ igbu ha - nke ahụ ọ bụ Onye Kraịst? Iwu Iri ahụ kwuru na anyị ekwesịghị igbu ọchụ - nke jikọtara n'okpukpe ndị Juu, nke Ndị Kraịst, na nke Alakụba.
Iji bụrụ nnukwu Onye Kraịst, ọ bụ otu esi ebi ndụ gị, mmekọrịta gị na Chineke, ka ọ bụ otu ị si akọwa Akwụkwọ Nsọ? Agụla m akwụkwọ ole na ole mara mma na nsụgharị Akwụkwọ Nsọ nke na-enye akaebe zuru oke na emehiela m na ntụgharị. Fọdụ Ndị Kraịst nwere ike ịsị na m na-ekwulu Chineke site na ịkọwa ya. Echere m na ọ bụ mpako na nke anyị ikwere na na ntụgharị site na Aramaic, na Grik, na Latin (ugboro abụọ), na Bekee nke English, na Bekee nke oge a na anyị efunahụghị ihe na ntụgharị. Ọ bụghị na anaghị m asọpụrụ Okwu ahụ, ọ bụ naanị na m na-eji ya dịka ihe nduzi na ọ bụghị usoro ntụziaka.
Achọrọ m ịchị ọchị. Achọghị m ịchị ‘ndị mmadụ ọchị’, mana m na-achị ‘ndị mmadụ ọchị’. Adị m abụba abụba ma m hụrụ njakịrị n'anya banyere abụba. Abụ m onye ọcha na ọ na-atọ m ụtọ ịnụ oke ọchị banyere ndị ọcha. M na-achị ọchị njakịrị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezighi ezi na South Park ma mee onwe m ole na ole. Echere m na ọ dị mma ịchị ọchị banyere onwe anyị ọ bụrụhaala na ọ dị na mmụọ dị mma, ọ bụghị mmụọ ime mmụọ. Ọ bụ ọdịiche anyị pụrụ iche nke mere ụwa a ji acha. Mata ha kama ịnwa izochi ha bụ isi ihe na-eme ka anyị na-asọpụrụ ibe anyị.
Amaara m na nke a bụ ihe ọmụma amamihe karịa ihe ị na-emebu mana echere m na ọ na-agbadata 'ịmara' na 'okwukwe' n'ihe niile anyị na-eme. Inwe okwukwe na ndị mmadụ bụ nnukwu onyinye - mana ọ bụ ihe siri ike ịzụlite nyere ya na ndị mmadụ na-emechu anyị ihu oge niile. Naanị ndị isi kacha nwee ụdị okwukwe a.
Knowingmara bụ otu n'ime okwu ndị ahụ na-emegiderịta onwe ya ma na-achọ ụfọdụ hubris, ọ bụghị ya? Anyị na-ekwu ihe dịka:
“Amaara m mmetụta gị” - mba, ị maghị.
"Amaara m ihe ndị ahịa chọrọ" - anyị na-achọpụta mgbe niile dị iche
“Anyị maara na anyị na-ghọrọ usoro” - ma anyị enweghị ike ọbụna ịgwọ ndị nkịtị oyi
“Amaara m na Chineke dị” - ị nwere okwukwe na-agwụbeghị ike na Chineke dị. Otu ụbọchị, ị ga-ama!
Na Friday m na-a hadụ ihe ọ withụ drinksụ na a nnọọ ole na ole folks. Anyị tụlere ihe niile ị ga - ezere - gụnyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukperechi. O juru m anya ịhụ na ụfọdụ ndị enyi m bụ ndị na-ekweghị na Chineke. M hụrụ na ịtụnanya. Echere m na ọ na-ewe nnukwu okwukwe ịbụ onye na-ekweghị na Chineke na m na-atụ anya ịgwa ha okwu banyere otu ha siri bata na mkpebi ha na ihe kpatara ya. Anaghị m eleda ndị na-ekweghị na Chineke anya - ebe ọ bụ na ha bụ ndị mmadụ, ekwere m na m kwesịrị ịkwanyere ha ùgwù ma hụ ha n'anya dịka onye ọ bụla.
Ourwa anyị nwere mmasị ịkpakọta anyị n'ime ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe na enweghị ndidi na nkwanye ugwu n'etiti. Mara bụ oji na ọcha, okwukwe na-agbaghara obere ma na-enye ohere maka ihe dịka ịkwanyere ugwu, ekele, na obi ike. Ka m na-eto, okwukwe m na-esikwu ike. Na okwukwe ahụ na-enwekwu ndidi maka ndị 'maara'.
Enwere m olile anya na m ga-anogide n’okwukwe m ma nabata ndị ọzọ.
MGBE: Echefuru m ịkọ post nke mere ka m dee ihe banyere nke a. Daalụ Nathan!
Nchịkọta Weebụ Pịa na-eme ya Ọzọ!
Jul 22, 2007 na 2:17 PM
Ghara slam ọkwa gị (nke dị anya na ya), mana nke a ga-abụ ihe kachasị mma.
Echere nke ọma ma dị mma. M na nso nso blogged banyere ngwọrọ nkwusa blọọgụ, ma ọ bụrụ na ndị ọzọ blogged dị ka nke a… M ga-enwe obi ụtọ nwoke.
Jul 22, 2007 na 2:30 PM
post a bụ otu n'ime ihe kpatara ị ga - enwe ebe na - adịgide adịgide na onye na - agụ ndepụta m. O doro anya na ọ nwere ike ọ gaghị abụ teknụzụ ma ọ bụ ahịa dabere mana oge ụfọdụ ọ naghị afụ ụfụ ịhapụ ka ndị folk mara na enwere akụkụ mmadụ nye anyị geeks.
Jul 22, 2007 na 2:59 PM
Bravo. Nke ahụ bụ niile.
Jul 22, 2007 na 8:27 PM
Enwere m mmasị inwe ezigbo arụmụka okpukpe. M na-ewere onwe m onye na-ekweghị na Chineke, mana ọ bụ ihe mmịfe na-atọ ụtọ site na Kristianị n'ime afọ ise gara aga ma ọ bụ karịa. Agaghị m akwụsị eziokwu ahụ bụ na ọ bụrụ na ị kwenyere n'otu okpukpe, ị na-anabata nhụjuanya ebighi ebi nke ndị ọzọ na-ata, n'agbanyeghị ụdị ndụ ndụ ha biri.
Maa ezigbo mkparịta ụka, ọ bụ ezie…
Jul 22, 2007 na 10:37 PM
N’ezie ọ bụghị mmehie ịba ọgaranya. Mana m ghọtara mgba gị. Mgbe m nọ na mahadum, agara m njem njem gaa India ebe anyị na ụmụ mgbei na ndị ekpenta rụkọrọ ọrụ (ee, ha ka dị). M gbalịsiri ike ruo ọtụtụ ọnwa mgbe m lọtara na otú ndị mmadụ si emefu $ $ na ihe "nzuzu".
Mgbe ahụ, m wee na-arụ ọrụ na a Hallmark ụlọ ahịa n'oge Christmas ezumike n'ihi na m mkpa $ maka akwụkwọ na-esonụ ọkara afọ agụmakwụkwọ. N'oge ahụ, achọpụtara m na n'agbanyeghị na ihe dịka Swarovski kristal enweghị uru ebighi ebi - ọ ka nyere ndị mmadụ ọrụ.
Mkpịsị mma mara mma nwere ike ịbụ oke oke - mana enwere onye na - eme mkpịsị akwụkwọ onye ezinụlọ ya nwere obi ụtọ na ọ nwere ọrụ.
Echere m na isi ihe bụ - ma ị nwere akụ na ụba ma ọ bụ na ịnweghị - onye ka ị tụkwasịrị obi? Oleekwa otú nke ahụ si egosi etu ị si emefu ego gị?
Banyere ihe ikwuru maka ọchị - agụela m ọchị ọchị nke Kraịst. Ma ọ bụ ụdị dị iche iche na Agba Ọhụrụ. Mana ọ na - ekwu maka - na m ga - egbu ihe a - otu a ga - esi jiri ọchị mee ihe banyere ọnọdụ mmadụ - ọ bụrụhaala na anyị dị njikere ịchị onwe anyị ọchị.
Agbanyeghị, ekele maka a na-enye ume ọhụrụ dị iche iche post!
Jul 23, 2007 na 8: 08 AM
Ederede na ihe ederede a dị egwu. “Ihe ị ga-ezere” bụ ihe anyị kwesịrị ikwu maka ya, yana web 2.0 na teknụzụ azụmaahịa, wdg. Ọ bụrụ na anyị anaghị atụle ntọala - amụma ndị ahụ - nke na-egosi ngosipụta ha site na omume, anyị anaghị 'ghọtazu ihe anyị mere.
Dika onye Kristian (ma na aha ma n'okwukwe), ekpebiri m ma oburu na abum onye nwere uche) igakwuru uwa dum n'uzo obula - dika ndi ekweghi na Chineke, ndi agnostics, na ndi ozo (ma oburu na ha nwere otu ụkpụrụ). Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị na-achọ mgbe niile ịghọta ma jụọ ajụjụ ndị ahụ na ụkpụrụ ndị na - esi na ya pụta - ma n'otu ma n'otu n'otu. M na-atụ ụjọ na ọtụtụ ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na US na-ezere okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụghị n'ihi na isiokwu ndị ahụ bụ nke onwe, mana n'ihi na anyị dị ka ọha mmadụ echefuola mkpa na mkpa ọ dị ịghọta amụma na ụkpụrụ (Ndị Kraịst, ekweghị na Chineke, jewish et al .), Ma kama enwere ike ịtụle ihe ndị a na ụdị Jerry Springer dị elu, nke na-arụpụta ihe na-adịghị mma.
Echere m na blọọgụ dị ka nke a bụ nnukwu ụzọ dị mma.
Jisie ike n’ọrụ dị ukwuu, nwanne m.
Jul 23, 2007 na 9:18 PM
Akwa post. Ọ dị mma ịnụ na a ka nwere ndị na-eji oge ụfọdụ ekwu maka nke a. A otutu azụmahịa kpọrọ ndị na-eche nnọọ banyere azụmahịa ha na ọtụtụ n'ime ha na-echefu ọbụna banyere ezinụlọ ha ..
Jul 23, 2007 na 9:20 PM
Akwa post. Ọ dị mma ịnụ na a ka nwere ndị na-eji oge ụfọdụ ekwu maka nke a. Ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa na-eche naanị banyere azụmaahịa ha ma ọtụtụ n'ime ha na-echefu gbasara ezinụlọ ha.
Jul 24, 2007 na 12:10 PM
Nke mbụ, n'ihi gịnị ka ndị Kraịst ji na-amata onwe ha mgbe nile? Na n'ezie, gịnị kpatara mmadụ ga-eji jiri okpukpe ọ bụla mara onwe ya?
Ana m asọ okwu ahụ "okwukwe" asị naanị n'ihi na ọ bụ nkwenye na-enweghị uche. Ihe dị mkpa banyere "nkwenye" ​​bụ na ọ bụ naanị nghọta sitere na ya - ka nghọta gị na-agbanwe, otu ahụ ka nkwenkwe gị si agbanwe. Ihe ịma aka na okwukwe bụ na enwere obere ohere maka mgbanwe (ma ọ bụ imelite!) Na ozi ọhụụ nke na-emegide ma ọ bụ na-agbagha okwukwe na-ajụkarị.
Maka m, enwere m 'nkwenkwe' - ekwere m ihe banyere ihe, ha nwere ike ịgbanwe dabere na nghọta. Enwere m onwe m ịgbanwe nghọta m, nke pụtara na enwere m nhọrọ, yana nhọrọ m na-ahụ maka akara aka m.
Enweela m post na-anọdụ '' ide 'maka ọnwa ole na ole ugbu a, na itinye naanị $ 0.02 m bara uru ebe a enyerela m aka rụpụta echiche ndị ọzọ (ugbu a ma ọ bụrụ na m nwere ike ịkwadebe akwụkwọ m ebe a na mpe mpe akwa).
Doug, nke a bụ nnukwu ọkwa ma ana m ekele gị.
(Nkọwa teknụzụ dị n'akụkụ: echiche ọ bụla banyere ihe kpatara m ga-eji gbanyụọ coComment na FireFox iji nwee ike biputere ebe a?)
Jul 24, 2007 na 1:33 PM
Bet nzọ. Naanị ihe m na-atụ anya ime bụ ime ka ndị mmadụ chee echiche. Nke ahụ bụ ihe blog bụ ihe niile gbasara 🙂